About us – Live the Dream
“Live the Dream” ဆိုတာ လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ တင်ပေးနေတဲ့ Media တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေကို Video ရိုက်ကူးပြီး သူတို့အိမ်မက်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြလဲ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လိုရခဲ့လဲ ဆိုတာတွေအပြင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့အိမ်မက်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်လဲဆိုတဲ့ အကြံပေးစကားတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ “Live the Dream” media ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်ပေါင်း 130K ကျော်က အားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့လူငယ်တွေရဲ့ အိမ်မက်တွေကို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ အကောင်အထည်ဖော်ကြပါစို့…
Company က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို စံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် interview လုပ်မှာဖြစ်ပြီး Brand Image အတွက် CSR လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားမှုတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ Videos တွေ ရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ Company ရဲ့ logo နဲ့ commercial videos တွေကိုပါ အတူတကွ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sponsor package plans အမျိုးမျိုးတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ( logo, commercial videos, article….) video သို့မဟုတ် article တွေနဲ့အတူ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Company ရဲ့ Brand Image မြှင့်တင်ခြင်း၊ CSR လှုပ်ရှားမှုများ…..
သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဝေမျှချင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားသူတွေကို အားပေးချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ် video ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Video မှာဆိုရင် Document screening နဲ့ Interview ဆိုပြီး ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ FB Page ကနေတစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် အောက်မှာပေးထားတဲ့ email address ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ([email protected]) ကျေးှဇူးတင်ပါတယ်။
“Live the dream” is an interview media for youths’ career education. We record videos of role models who work cool. On the videos, they explain how they get the job opportunity and how they work in order to helps every young person find their dreams and future plans. “Live the Dream” media is supported by 130K youths over the Myanmar (Nov., 2018).
Why don’t you deliver “Dream” to Myanmar youths together with us??
1. For enterprise
We’ll record company staff’s interview as role model. For brand image upgrading, CSR activities, recruitment and internal employee education. You will have your logo and commercial video with the video and managers / CEO can be on the video. Various sponsor package plans are available.
We’ll put your ads (logo, commercial video, article…) with the video or on the article. For brand image upgrading, CSR activities…
Individuals who want to express their career life story and encourage people on public can apply for role model story video recording. There will be document screening and an interview.
If you are interested, please be free to contact this FB page or email address ([email protected]). Thanks.